Weerarkii MSN oo dib u soo noolaanaya Xagaaga Cusub….(Aqriso WAR CULUS oo laga helay Neymar) – Gool FM
Weerarkii MSN oo dib u soo noolaanaya Xagaaga Cusub….(Aqriso WAR CULUS oo laga helay Neymar)
(Europe) 18 Okt 2018. Weerarki Halista ahaa ee MSN, Messi, Suarez iyo Neymar ayaa dib u soo noolanaya xagaaga Cusub sida ay sheegayaan warar dhawaan gal ah.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa heshiis la gaaray kooxdiisa PSG uu ku aadan inuu dib ugu laabanayo gegada caanka ah ee Camp Nou.
Waa wax ka yar labo sano tan iyo markii uu Neymar Barcelona uga soo tagay kooxda reer France waliba lacagihii ugu badnaa ebid kubbada cagta 199 milayn oo bound.
Yeelkeede, Cadena SER, ayaa iminka warineysa in 26-jirka uu Madaxwaynaha kooxda PSG Nasser Al-Khelaifi uu la gaaray heshiis uu kooxda uga tagayo xagaaga soo socda.
Neymar ayaana la warinayaa inuu maalin ku soo qaatay tartan ka dhacayay xeebta dalka Portugal si uu ugu dabaal dego aqbaartan cusub ee suuro galineysa inuu dib ula midoobo saaxiibadiisii hore ee Messi iyo Suarez.
Wuxuu taageerayay xiddiga ay dhalashada wadaagaan ee Gabriel Medina kaa oo ka qeyb qaadanayay tartanka MEO Rip Curl Pro Portugal.
Inkastoo uu shaki ku jiro Mustaqbalkiisa horyaalka Faransiiska misane Neymar ayaa ku jira qaab ciyaareed aan innaba caadi ahayn.
Wuxuu dhaliyay 11-gool kulamadii uu u saftay kooxda PSG. Laakiin saas ay tahay waxaa qariyay Duufaanta wiilka yar ee Kylian Mbapp kaa oo Toban gool dhaliyay Todobo kulan.
19-jirka ku soo guuleystay koobka adduunka ayaa noqday udub dhexaadka kooxda ka talisa Parc des Princes taa oo mid la heli kara ka dhigeysa suurogalnimada uu Neymar dib ugu laabanayo horyaalka La Liga.
Kahor kulanka adag ee La Liga, wax ka ogoow wax walba uu Messi kasoo sameeyay kulamada uu kahor yimid kooxda Sevilla